सुदूरपश्चिममा नेकपाको कुन समूह बलियो ? शक्ति प्रदर्शनको नतिजाले यस्तो देखायो – Bannigadhi Today
मंगलबार, मंसीर १४, २०७८ | Tuesday, November 30, 2021
मंगलबार, मंसीर १४, २०७८
सुदूरपश्चिममा नेकपाको कुन समूह बलियो ? शक्ति प्रदर्शनको नतिजाले यस्तो देखायो
एकेन्द्र खत्री २०७७ माघ १८, आईतबार १२:११
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दुई समूहमा विभाजित भएसँगै सुदूरपश्चिममा कसको पक्ष बलियो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । दुवै समूहले आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेपछि कसको पक्ष बलियो बन्नेबारे राजनीतिकवृत्तमा चर्चा सुरु भएको हो ।
दुवै समूहले आ–आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशमा ओली पक्षका नेता लेखराज भट्ट र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता भीम रावलमध्ये को बलियो भन्ने कुराले अझ व्यापकता पाएको छ ।
शनिबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षको जनप्रदर्शनमा सोचेभन्दा बढी जनसभागिता देखिएपछि उक्त समूह उत्साहित देखिएको छ । सुदूरपश्चिमको जनसभागिता देखेर नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले सुदूरपश्चिमवासीलाई धन्यवाद दिए । प्रचण्डले भने, ‘विशाल उपस्थिति जनाएर ओलीलाई ‘फुच्चे’ बनाइदिएकोमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई धन्यवाद छ ।’ धनगढीमा आयोजना गरेको भेलापछि ओलीको फुर्ती बढे पनि अहिले उनको घमण्ड तोडिएको दाबी गरे । प्रचण्डले धन्यवाद दिइरहँदा मञ्चमा बसेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलको अनुहारमा मुस्कान छाएको थियो ।
नेता रावल धनगढीमा भएको विरोध प्रदर्शनकै लागि जनसभागिता जुटाउन हप्ता दिनदेखि यहाँ रहेका थिए । उनकै नेतृत्वमा शनिबार धनगढीमा र्याली निकालिएको थियो ।
जनप्रदर्शनका लागि नौवटै जिल्लाबाट नेता तथा कार्यकर्ता धनगढी पुगेका थिए । यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरमान चौधरीले आमसभामा सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लाबाट ७० हजारभन्दा बढी जनता सहभागी भएको दाबी गरे । प्रदेशका सबै जिल्लाबाट नेता–कार्यकर्ता एक दिन अघिदेखि नै धनगढी आउन सुरु गरेका थिए । अझै यातायातको समस्याका कारण सबैले आउन नसकेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले जनाएको छ । धनगढीको खुलामञ्चमा कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म पनि बसबाट मानिस आई नै रहेका थिए । धनगढीको खुलामञ्च खचाखच भरिएपछि धेरै मानिस सडकमै उभिन बाध्य थिए ।
आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको भन्दै ओली पक्षले यसअघि पुस २४ मा जनप्रदर्शन गरेको थियो । सो समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जनसहभागिता देखाउन हदैसम्मको प्रयास गरेका थिए । ओली सरकारमा सुदूरपश्चिमबाट संघीय सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना छन् । ओली पक्षमा जनसहभागिता जुटाउन यी चार मन्त्रीसहित सोही समूहका प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा पनि जुटेका थिए । पुस २४को कार्यक्रममा समूहको जनसभागिता देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षका नेता लेखराज भट्टलाई धन्वाद दिएका थिए ।
नेकपा ओली समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभामा कम्तीमा ४० हजार संख्यामा जनसहभागिता जुटाएको त्यतिबेला आकालन गरिएको थियो । यतिसम्म कि कतिपयले साविक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति संख्या पुग्न नसकेको सहभागीको भनाइ थियो । नेता लेखराजले समेत सुदूरपश्चिममा कसको जनमत रहेको पुस २४ गतेको जनसभाले प्रमाणित गरेको भन्न भ्याएका थिए ।
माओवादी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका भट्ट पहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्थे । पार्टी एकीकरणका बेला उनलाई कुनै पनि पद दिइएन । सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइए, साविक एमालेका नेता भीम रावल । दाहालकै मनसायबाट रावललाई च्यापेर आफूलाई किनारीकृत गरिएको ठहरपछि उनी असन्तुष्ट थिए । त्यसको रिसले पनि उनी ओली पक्षमा गएको धेरैको बुझाइ छ ।
नेकपाको दुई समूह हुनुभन्दा पहिले पनि यहाँ नेता भीम रावल र लेखराज भट्टबीच समुधर सम्बन्ध हुन सकेको थिएन । दुई नेताको राजनीतिक धार पहिलेदेखि नै फरक देखिन्थ्यो । रावल ओलीका पहिलेदेखि कट्टर विरोधी देखिन्थे । दुई पक्षबीच आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्न दुवै पक्षले विभिन्न प्रपञ्च गरेका छन् ।
शक्ति प्रदर्शनका लागि दुवै पक्षले पहाडी जिल्ल्लाबाट जनता ओसारेकै हुन् । धनगढीको खुलामञ्च दुवै पक्षले भरिभराउ गरे पनि स्वस्र्फुत रुपमा पनि अझै जनता सहभागी नभएको पनि धेरैको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा जनता बढी भएको दाबी गरे पनि कसको पक्षमा बढी छन् भन्ने बुझ्नका लागि भने निर्वाचन नै पर्खिनुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार, हेडलाईन
म्याग्दीमा जिप दुर्घटना : वडा सदस्यसहित ४ जनाको…
भीम रावललाई भोट नहाल्न भन्दै एमाले प्रतिनिधिहरुलाई बाँडियो…
राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को…
लियोनल मेस्सीलाई साताैँ पटक बालोन ‘डी’ ओर अवार्ड
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना सङ्क्रमण
निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्छु : भीम रावल
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान चल्दै
एमाले महाधिवेशन : मतदान राति ११ बजेपछि सुरु…
१ म्याग्दीमा जिप दुर्घटना : वडा सदस्यसहित ४ जनाको मृत्यु
२ भीम रावललाई भोट नहाल्न भन्दै एमाले प्रतिनिधिहरुलाई बाँडियो पर्चा
३ राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
४ लियोनल मेस्सीलाई साताैँ पटक बालोन ‘डी’ ओर अवार्ड
५ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना सङ्क्रमण
६ निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्छु : भीम रावल
७ एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान चल्दै
८ एमाले महाधिवेशन : मतदान राति ११ बजेपछि सुरु हुने